Ny fahaizan'i Google amin'ny 2015 Doodles | Famoronana an-tserasera
Ny fahaizan'i Google ao amin'ny Doodles 2015
Fotoana vitsy lasa izay, Google dia nahazatra anay ny nandray ny ephemeris tamin'ny sarimiaina sy sary mahaliana. Isaky ny miditra ny pejiny voalohany isika dia mahita endrika izay mamela antsika hahatadidy daty manan-danja sy hitadidy ireo zava-nitranga manan-tantara manan-danja indrindra. sarin'ny dia teny anglisy fiaviana izay azo adika ho scrawl amin'ny teny espaniola. Ity teny ity dia nakan'i Google hanome lanja ny kanto sary azy ary miasa izy io ho toy ny rohy mankany amin'ny fanazavana amin'ny antsipiriany kokoa momba ilay daty resahina. Raha mikitika ny doodle ny mpampiasa dia ho afaka hiditra amin'ilay daty voalaza izy ireo sy ireo hetsika izay hajain'ny motera fikarohana lehibe indrindra ankehitriny.
Ankoatr'izay, ity rindranasa ity dia azo namboarina ihany koa arakaraka ny faritra na faritra iankinan'ny vavahady na miankina amin'ny mpampiasa mampiasa ny motera fikarohana aza. Raha mpampiasa voasoratra anarana ao amin'ny mailaka Google io dia azonao atao ny mandray fiarahabana amin'ny alàlan'ny Doodle. Ireo endrika ireo dia mavitrika hatrany ary mampiseho tarehin-tsoratra sy tarehimarika solontenan'ny daty resahina. Ilaina io fitaovana io amin'izao fotoana izao hahafantarana ny endriny manjaka ankehitriny, tsy azontsika hadinoina fa miresaka momba ilay goavana goavan'ny Internet isika ary noho izany dia mpanafika sy mpitarika amin'ny famolavolana tranonkala. Alohan'ny faran'ity taona ity, andao hanao famerenana miaraka ohatra sy lamina vitsivitsy avy amin'ny motera fikarohana lehibe indrindra manerantany.
Tongasoa eto amin'ny ririnina.
Fahitana ranoka any Mars.
Ny fanombohan'ny fiadiana ny amboaran'i Amerika any Chile.
Andro nalaina ny sary Loch Ness.
Natalio avy amin'ilay mpanao hosodoko Remedios Varo.
Fifidianana any Mexico 2015.
Tsingerintaona nahaterahan'ny mpampiasa Google.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Ny fahaizan'i Google ao amin'ny Doodles 2015
Sary hosodoko amin'ny tranobe antsoina hoe 'Evolution' nataon'i Blu